Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: နိုင်ငံခြားသားစိမ့်ဝင်မှု အမျိုးသားရေးပြဿနာ
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာအပေါ် မြန်မာ နိုင်ငံအစိုးရက တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ် ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးသော် လည်း ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ အတွင်း အုပ်ချုပ်မှုလျော့ရဲခြင်း များ၏ နောက်ဆက်တွဲ နိုင်ငံခြားသားစိမ့်ဝင်မှု ပြဿနာသာဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်သာမက အခြားပြည်
နယ်အချို့တွင်လည်း နိုင်ငံခြား သားစိမ့်ဝင်မှုကို အမြန်ဆုံးဆွေး နွေး ဆောင်ရွက်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သူတို့ကဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အချို့ မြို့များတွင် ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီများ က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများထက်ပင် အရေအတွက်များပြားနေသည်။ တိုင်းရင်းသားများက လူနည်းစု ဖြစ်နေသည့်အတွက် လက်ရှိအရေး
ပေါ် အခြေအနေကြေညာထားရ သော ထိုဒေသမှအစပြုကာ တက်ကြသူ ပြည်သူတို့က နိုင်ငံခြားသား
စိမ့်ဝင်နေမှုအခြေအနေကို ပြည်တွင်းရှိ အမျိုးသားရေးပြဿနာ အဖြစ် ရှုမြင်ထောက်ပြလာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားစိမ့်ဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ နှစ်ရှည်ကြာ ရွှေ့ပြောင်းလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ များအရေးသည် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ တို့က ဆွေးနွေးစကားပြောရန် လိုလာသည့် ပြဿနာဖြစ်လာ ကြောင်း ရွေးကောက်ခံလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့က သုံး သပ်ပြောကြားသည်။
လူမျိုးခြားစိမ့်ဝင်မှု ဦးရေ တစ်နေ့တစ်ခြား များပြားလာခြင်း ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ထိုကဲ့ သို့သော ပြဿနာမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်မည်ကို လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကျော်ကပင် သတိထားမိခဲ့ ကြောင်း စာရေးဆရာ ဆရာကြည် မင်းက ဆိုသည်။
"အခုကိစ္စက နိုင်ငံရေးတာ ၀န်ကို ထမ်းဆောင်တယ်မဟုတ် ဘဲနဲ့ အမျိုးသားရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင် နဲ့ လက်တွဲကြရမှာပါ။ အာဏာရ ပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလက်တွဲ ကြရမှာပါ။ လူကတဖြည်းဖြည်း များများလာတော့ တစ်နေ့နေ့ တော့ ပြဿနာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သ တိထားမိတယ်"ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိပြောဆိုနေကြသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်း ဖက်မှုများသည် ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် လုံး ၀မသက်ဆိုင်ဘဲ ရခိုင်တိုင်းရင်း သားပြည်သူများရင်ဆိုင်နေရ သည့် လူဦးရေသန်းထောင်ချီရှိ သည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှ နိုင်ငံခြားသားများ စိမ့်ဝင်နေခြင်း
ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းအမျိုးသား ရေးပြဿနာကို ပြည်တွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကပါ ပူး
ပေါင်းပါဝင်ကူညီရန်လိုအပ် ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကိုမြအေး က ထောက်ပြအကြံပြုသည်။
ဒုက္ခသည်များအဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာသော ရိုဟင်ဂျာများ အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ယင်းဒုက္ခသည်များအား တိုင်းရင်းသား အဖြစ်လက်ခံရန် ဖိအားပေးမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ယင်းဖိအားပေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ "ဒီရိုဟင်ဂျာပြဿနာ ကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံတာကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဒုက္ခသည် တွေအနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာ မှုအရ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ချင်းစာ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင် ငံရဲ့ သဘောကောင်းမှု၊ လိုက်လျော မှုကို နိုင်ငံကြီးတွေကနေပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံရမယ်လို့ ဖိအားပေးလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ လုံးဝသည်းညည်းခံမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး"ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကို ကြီးက ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆို သည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားစိမ့် ၀င်မှု ပြဿနာသည် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုလက်ထက်က ရွေးကောက်ပွဲ မဲ ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအသုံးချ မှုမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခု နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားသားဝင်ထွက် မှုကို စိစစ်ရသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒရေးရာ လျော့ရဲ မှုကြောင့်ဟုလည်း ထောက်ပြကြသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦး လည်းဖြစ်ပြီး ရှမ်းအမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးစိုင်း လိတ်က "၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု လက် ထက်က ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်း သားထဲမှာပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တာ က သမိုင်းကြောင်းအရ လေ့လာ စိစစ်ပြီး ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလည်း ခံ ယူခဲ့တာမရှိဘူး။ သူအာဏာရဖို့ အတွက် ပြောခဲ့တာပဲ။ ဒီနောက် ဆက်တွဲရလဒ်အနေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ခုပြဿနာတွေကတော့ အစိုးရ တစ်ဖွဲ့တည်းအနေနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူး။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ အားလုံးရော၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းတွေရော၊ အလွှာပေါင်းစုံ က လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်ပြီး ဥ ပဒေကြောင်းအရ လူမျိုးရေး၊ ဘာ သာရေးအဓိကရုဏ်း မဖြစ်အောင် ပါဝင်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုနေတယ်" ဟုပြောသည်။
ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စပြော လျှင် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် နားလည်သ ဘောပေါက်မှုကလည်း အရေး ကြီးကြောင်း ဆရာကြည်မင်းက ယခုကဲ့သို့ သုံးသပ်သည်။
"ဒီပြဿနာက နိုင်ငံတကာ ကလည်းပဲ ကိုယ့်အပေါ် အမြင် ကြည်ဖို့လိုတဲ့ ပြဿနာမျိုးဖြစ်နေ တယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေရသ လဲဆိုတာကို ကိုယ့်အစိုးရက ဘယ် လောက်ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ လိမ်လိမ်မာမာ ဖြေရှင်းနေရသ လဲဆိုတာကို နိုင်ငံတကာအသိုင်း အ၀ိုင်းက မြင်ဖို့လိုတယ်။ လုပ်ရ တာကလည်း တော်တော့်ကိုမ လွယ်တာ အဲဒီလို မလွယ်တဲ့အခါ ကြတော့ လုပ်ရတာက တော်တော့် ကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ဖြေရှင်းရ တဲ့ကိစ္စမှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ၀ိုင်းကလည်း ၀င်ကူဖို့လိုတယ်"
နိုင်ငံခြားသား စိမ့်ဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ပြိုင်နက်ထည်း ထောက်ပြခံရသည့် လူဝင်မှုကြီး
ကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်သည့် ပြည်သူ့
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက် တာအေးမောင်ကလည်း ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုသည်။
"လ၀ကမှာလည်း မျိုးချစ် စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ လူမျိုးများကို ထည့် သွင်းပြီး သေချာကိုင်တွယ်သင့်ပါ တယ်။ လုံခြုံရေး၊ လူဝင်လူထွက် စစ်ဆေးရေးတို့ကို ပြည်နယ်အစိုး ရလက်အောက်မှာ ထားရှိသင့်ပါ တယ်"
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ရေးဥပဒေများက ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိ နေသော်လည်း ဥပဒေကိုင်တွယ် ကျင့်သုံးနေသည့်အဖွဲ့အစည်း များကြောင့် လူမျိုးခြားစိမ့်ဝင်မှု များဖြစ်နေသည်ဟုဆိုကြသည်။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင် ငံသည် ပထ၀ီအနေအထားအရ ပင်လယ်ချင်း ထိစပ်နေသည့်အ တွက် ရေကြောင်းမှတစ်ဆင့် အ ချိန်မရွေး ၀င်ရောက်လာနိုင်ရာ နယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုလည်း တင်း ကျပ်ရန် လိုအပ်ပြီး အခြားအိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံများတွင် ရေပိုင်နက်အ တွင်းကျူးကျော်သူများကို အရေး ယူသည့် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်း ဥပဒေများလည်း ရှိသင့်ကြောင်း ၎င်းင်းကပင် သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ရိုဟင်ဂျာ၏ သမိုင်းကို ပြန် ကြည့်လျှင် ရိုဟင်ဂျာဟူသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုး၏ နာမည်မဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘာသာစကားဖြင့် ရိုဟင်-ရခိုင်၊ ဂျာ-ပြန်လာသူ (ရခိုင် မှ ပြန်လာသူ) ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ
ရိုဟင်ဂျာများသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှ ရောက်ရှိလာသော ဘင်္ဂါ လီမွတ်ဆလင်များသာဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ် သော ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ စာ တမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုး များတွင် လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် လက်ခံခြင်းမရှိသည့် ရိုဟင်ဂျာ
များနှင့် လက်ရှိပြဿနာများသည် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများ၏ အကြမ်းဖက်မှုဟုသာ ခေါင်းစဉ် တပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်အတွက် ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆက်ကိုမထားသင့်တော့ ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ညာဏစိုးက ပြောသည်။
၎င်းင်းကပင် ဆက်လက်၍ နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကိစ္စကို ထပ်ပြော သည်။
"လ၀ကဥပဒေအရ တစ် တိုင်းပြည်လုံးက ကိစ္စတွေကို ဖော် ထုတ်ပြီး အားလုံးကိုအရေးယူရ မယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေတင်မကဘူး။ အရှေ့နဲ့အရှေ့မြောက်မှာလည်း တရုတ်တွေ စိမ့်ဝင်နေတယ်။ သူ တို့တွေက တစ်ပြည်လုံးကို စိမ့် ၀င်သွားတော့ မသိသာဘူး။ တစ် တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ နယ်စပ်တွေမှာ ဥပဒေက တစ်ပြေးညီရှိရမယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
7Day News Facebook
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 00:51
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: နိုင်ငံခြားသားစိမ့်ဝင်မှု အမျိုးသားရေးပြဿနာ . All Rights Reserved